Rostov State University Medical - Fianarana Mbbs in Rosia
Firenena : Russian Federation
City : Nadininy
fanafohezan-teny : RSMU
Créé : 1918
Aza adino ny discuss Rostov State Medical University
The Rostov State University Medical no lehibe indrindra fanofanana fototra sy ny Research Center in Southern Rosia. Nandritra ny 85 taona ny fisiany efa lasa samihafa sarotra amin'ny 10 departemanta, Medical College, Miaramila sy ny Foibe Fanofanana ny Clinic.
Fitarihana sy efa mandroso dokotera ny tanintsika dia niforona miorina amin'ny The Rostov State University Medical ny sekoly ara-tsiansa lehibe, tarihan'ny ny Nomem-boninahitra mpiasa ny Science, Mpiasa ny sekoly ambaratonga faharoa, voninahitra Doctors, Voninahitra Mpiasa ny Fahasalamana sy ny Kolontsaina, ary koa ny mpahay siansa eran-laza.
Amin'izao fotoana izao ao amin'ny Rostov State University Medical miasa 92 departemanta, ny zandriny indrindra amin'izy ireo dia ny Departemantan'ny Medical Lalàna. Enin-jato mahery ny mpampianatra are constantly working introducing innovations and interactive forms of learning. Anisan'izany misy mihoatra noho 119 Doctors ny Science, mpampianatra ary ny 350 PhDs. The academicians and professors who are working at our University now continue to develop the best traditions of their predecessors.
Rafitr'ity tontolo ity fanampiny Education Mizara ho sokajy maromaro. At the University there are training programs for doctors and medical organizations from all over the South of Russia. Every year about 8000 dokotera dia retraining amin'ny Faculty Fampiofanana, mihoatra ny 1000 interns and residents — at the Faculty of Professional Retraining. Ankoatry ny, ny University manana fiomanana Faculty tamin'ny Foreign Training olom-pirenena, because The Rostov State Medical University is an international medical school that trains representatives of more than a hundred nationalities and ethnic groups from all over the world.
Ny mpahay siansa no nikarakara ny asa sy narindra ny siansa sy ny fikarohana asa ary ampiharina eo an-departemanta sy ny antokony. Ny Central Scientific Research Laboratory (CSRL) asa tsara, toerana isan-karazany ny zavatra simika, molekiolan'ny-fototarazo, morphological, microbiological fanadihadiana mitondra avy. Manana ny siantifika sy ny Fikarohana Institute of fitandremam ary mikasa ny manana ny siantifika sy ny Fikarohana Institute of Urology sy Neurology. Ny fikarohana siantifika atao amin'ny 5 fototra ara-tsiansa ny toro-lalana: fitsaboana-niteraka olana; tontolo iainana-madio olana (ny tontolo iainana sy ny fahasalamana) ny fiarovana ny fahasalamam-bahoaka; siansa sy ny fandaminana ny asa ho an'ny fisorohana, aretina sy ny fitsaboana ny vehivavy, reny sy ny zaza ny aretina lehibe; siansa sy ny fandaminana ny asa ho an'ny fisorohana, aretina sy ny fitsaboana ny fandidiana aretina; siansa sy ny fandaminana ny asa ho an'ny fisorohana, aretina sy ny fitsaboana ny aretina lehibe anatiny.
Misy 3 Dissertation Komity for Ph.D. ary doctorat dissertations fiarovana.
Ny Rostov State University Medical siantifika iraisam-pirenena dia manangana fiaraha-miasa amin'ny firenena maro fifanakalozana ara-tsiansa mpiasa, mpianatra, mpampianatra, tena mahay sy manam-pahaizana manokana iraisam-pirenena mandray anjara amin'ny famelabelaran-kevitra ara-tsiansa sy ny congresses.
Ny Clinic ny University dia multi-pitsaboana saha andrim-panjakana, izay manana fahafahana malalaka ny fizahana aretina maoderina fianarana sy avo lenta ny mahomby consultatif manokana, fizahana aretina sy fitsaboana ara-pahasalamana ho an'ny mponina ny Rostov faritra sy faritany hafa ny Southern Distrika Federaly sy ny Federasiona Rosiana. Izany ihany koa ny lehibe indrindra fanofanana fototra, izay manana toe-javatra rehetra ho an'ny fanabeazana dingana mampiasa ny mandroso endrika sy ny fomba maoderina ny fampiofanana sy ny zava-bita eo amin'ny siansa ara-pitsaboana. Ao amin'ny Clinic ny mpianatra hahazo ny fahaiza-manao ilaina sy ny Fantaro indrindra fitaovana maoderina-pitsaboana.
The Dia ahitana toeram-pitsaboana ny RSMU 20 inpatient vondrona miaraka amin'ny 675 fandriana (ao anatin'izany ny 125 andro care fandriana), 2 Departments ny Anesthesiology ary Resuscitation, Consultatif Outpatient Department, ny Dental Department, Medical Cmiditra, Chiditra ny Medical fitsaboana maso,, 13 fitsaboana-diagnostIC subdivisions, Blood Technology Center. Amin'izao fotoana izao ny toeram-pitsaboana mpiasa dia ahitana ny353 dokoteraS, ao anatin'izany ny 11 mpampianatra, 28 Doctors ny Fitsaboana sy ny 52 PhDs;mihoatra ny 30 mpiasa ao amin'ny oniversite no tena manam-pahaizana manokana sy ny manam-pahaizana ivelany ny Minisitry ny Fahasalamana ao amin'ny Federasionan'i Rosia tao amin'ny Southern Federal District, ny Ministeran'ny Fahasalamana ny Rostov faritra sy ny Municipal Council «Fahasalamana Management in Rostov-on-Don».
Tao anatin'ny taona vitsivitsy ny centralization sy ny automatique ny maro fizahana aretina sy ny sampan-draharaha ara-pitsaboana ny University avela hifantoka sy fomba mijery ny tena mampiasa ny mpiasa, -pitsaboana fitaovana, manatsara ny kalitaon'ny asa ara-drafitra tarika tsirairay, ary mamorona ny teknolojia ny mitohy fitsaboana-fizahana aretina dingana.
Ny Rectorship manisy ireo lanja manokana ny momba ny fandaminana ny fanabeazana dingana ao amin'ny Anjerimanontolon'i. Ankehitriny isika hametraka ifandrimbonana ampy fampiofanana sy ny fanabeazana computerize dingana. Ny tsara indrindra mpampianatra sy ny mpampiana-University dia manana fahafahana mba maintsy Mazava ho azy fa ny internship amin'ny toeram-pitsaboana ara-pitsaboana sy ny oniversite ao Eoropa.
Eo ambany ny fanatanterahana ny tetikasa laharam-pahamehana-pirenena «Fahasalamana» ny Administration ao amin'ny Oniversiten'i dia mavitrika sy mivoatra amin'ny fomba mahomby fanatanterahana fandaharan'asa ny fitsaboana maoderina-fanarenana ara-tsosialy ny ankizy sy ny tanora amin'ny azo ampiharina ny fahasalamana. Eo ambany ny fanatanterahana ny asa fanabeazana ny laharam-pahamehana tetikasa-pirenena tany amin'ny tontolon'ny fikarakarana ara-pahasalamana ny dokotera ho an'ny Rostov faritra sy ny faritra Kaokazy rehetra dia soa aman-tsara tao aminay niofana University.
Faculty ny Dentistry;
Faculty ny Pediatrics;
Faculty ny Pharmacy;
Faculty ny mpianatra iraisam-pirenena
Ianao ve mila discuss Rostov State Medical University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Photos: Rostov State University Medical ofisialy Facebook